မှားယွင်းသောအယူဝါဒ -၂၀၁၄ | The Apostasy - 2014 | Real Conversion
THE APOSTASY - 2014
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၈ )ရက်နေနံနက်ပိုင်းတွင် လော့(စ်)အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle ၌
“အဘယ်သူမျှသင်တို့ကို အဘယ်သို့သောအားဖြင့် မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မ တိုင်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီး ခြင်း၏သားသည် ပေါ်လာရလိမ့်မည်။ (၂ သက် ၂း ၃ )
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီ စာတန်၏မှားယွင်းသောအယူဝါဒနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဟောပြောခဲ့သည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီ နောဧခေတ်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏ ရှင်းလင်းသော ပုံဆောင်မှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ နောက်ဆုံးသောကာလသည် နောဧခေတ်ကာလနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (မဿဲ ၂၄း ၃၇ ) ဒီမနက်တွင် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်ရှိ သော မှားယွင်းသည့်အယူဝါဒများကို ရှင်းလင်းစွာ ကြိုတင်ဟောပြောထားသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို ဝေငှလိုသည်။
သက်သာလောနိတ်မြို့တွင်ရှိကြသော ခရစ်ယာန်များသည် ရှုပ်ထွေးပြီး ကြောက်လန့်ခဲ့ကြသည်။ မှားယွင်းသောအယူစွဲသူများက သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည် ကျရောက်ပြီမို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာ လအတွင်းအသက်ရှင်နေကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၎င်းမှာ ဖြစ်နိူင်သောအရာမဟုတ်ကြောင်းကို ဆိုခဲ့သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမစတင်မှီတွင် ဖြစ်ပျက်မည့်အရာနှစ်ခုရှိ သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟူသည်မှာ အသင်းတော်ခေတ်၏အဆုံးပိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်မည့် ခုနှစ်နှစ်အချိန်ကာ လဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် အန္တီခရစ်သည် သူ၏အခွင့်အာဏာအားဖြင့် လောကကို အစိုးရပေမည်။ ခုနှစ်နှစ်ကာလအဆုံးပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် အမျက်တော်ခွက်ဖလားခုနှစ်ခုကို ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်သော လောကကြီးအပေါ်သို့သွင်းလောင်းပေမည်။ “ခရစ်တော်၏နေ့ရက်”နှင့် “သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်”ဟူသည်မှာ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှစ၍ ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီး နိူင်ငံတော်တည်ထောင်သည့်အချိန်အထိကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သက်သာလောနိတ်မြို့တွင်ရှိသောခရစ်ယာန်များက သူတို့သည် ထိုအနာဂတ်တရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြကြောင်း မှားယွင်းစွာ ဆိုကြသည်။ ထိုအပြင် တမန်တော်က ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမစတင်မှီတွင် အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလျဉ်းမရှိရန်သွန်သင်ခဲ့သည်။
၁။ ပထမအချက်- “ဖောက်ပြန်ခြင်းမတိုင်မှီ ထိုနေ့ရက်ကျရောက်မည်မဟုတ်။” [၎င်း သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီတွင် ဖြစ်ပျက်မည်။ ]
၂။ ဒုတိယအချက်- “ဒုစရိုက်၏လူတည်းဟူသောပျက်စီးခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာ လိမ့်မည်။” [ ဤသည်မှာ နောက်ဆုံးသောကာလတွင် လောကကိုအစိုးရ မည့် အန္တီခရစ်အတွက် တမန်တော်ပေးသောနာမဖြစ်သည်။ သူသည် ဘေး ဒဏ်ကြီးကာလအစပိုင်းတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။]
ပရောဖက်ပြုချက်အများစုက ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဖြစ်အပျက်များထဲသို့ ချက်ချင်းထိုးနှစ်ကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အမြဲတမ်း စိတ်ပါလက်ပါမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအဖြစ်ပျက်များကို အချိန်တိုင်း ဖော်ပြပြောဆိုထားသော်လည်း ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမစတင်မှီဖြစ်ပျက်သော အရာကို ပို၍စိတ်ဝင်တစားရှိပေသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသော ယနေ့ခေတ်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကျဆုံးပျက်စီးနေသောအချိန်”ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြသည်။
လူတို့အသက်တာတွင် ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များကို မည်သို့သွန်သင်နိူင် မည်ကို ကျွန်ုပ်နားမလည်ခဲ့ပေ။ ထိုသို့သောသွန်သင်မှုမျိုးက “ယားသောနားရှိလျက် မိမိကိုယ်ကို ဆရာများဟု ထင်မှတ်ယူဆသောသူများ”ကို ကူညီထားသည်ဟုသာ ယူဆခဲ့သည်။ (၂ တိမောတေ ၄း ၃ )
ကျွန်ုပ်သည် ယနေ့နံနက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းဖော်ပြထားသည့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒ တည်းဟူသော ဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကို အနည်းငယ်ဝေငှလိုသည်။ ယနေ့ခေတ်မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏ အရင်းအမြစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်၏နက်ရှိုင်းသော သမိုင်းနှင့်သီဪလော်ဂျီဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်ကိုလေ့လာ ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
၁။ ပထမအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒပေါ်လာခြင်း
“အဘယ်သူမျှသင်တို့ကို အဘယ်သို့သောအားဖြင့် မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မ တိုင်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီး ခြင်း၏သားသည် ပေါ်လာရလိမ့်မည်။” (၂ သက် ၂း ၃ )
ယခုတွင် “မှားယွင်းသောအယူဝါဒ”တည်းဟူသောစကားလုံးကို ဆင်ခြင်ပါ။ ၎င်းမှာ NASB ကျမ်းစာက “ဖောက်ပြန်ခြင်း” ဟု တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုထားသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဂရိစကားလုံး၏ဆိုလိုရင်းမှာ “အဝေတစ် နေရာမှရပ်တည်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ သမ္မာတရားမှ ရှောင်ထွက်ဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ Dr. W. A. Criswell က “သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်မတိုင်မှီ ဝန်ခံသောယုံကြည်သူများ၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအမှတ်အသား
ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုစကားအသုံးပြုပုံတွင် တမန်တော်ပေါလု၏စိတ်ထဲတွင် တိကျသည့်မှားယွင်းသောအယူဝါဒ ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပေသည်။ (၂သက် ၂း ၃ နှင့်ပါတ်သက်၍ The Criswell သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာမှုမှတ်စု) ဂရိစကားလုံးများမှာ “he apostasia” - မှားယွင်းသောအယူဝါဒ - အရင်တစ်ခုနှင့်လုံးဝတူညီမှုမရှိ၊ နောက်တွင် ဖြစ်မည့်အရာနှင့်လည်းတူမည်မဟုတ်-မှားယွင်းသောအယူဝါဒဖြစ်သည်။ Dr. Charles C. Ryrie က ကျွန်ုပတို့၏ အခြေပြုကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ပြောဆိုသည်မှာ မှားယွင်းသောအယူဝါဒဟူသည် ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော အန္တီခရစ်ပေါ်လာခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောနည်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။” ( ၂ သက် ၂း ၃ နှင့်ပါတ်သက်၍ Ryrie သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း မှတ်စုတို )
ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလတွင် မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ ရိုးစင်းသောအဖြေမှာ အများကြီးအကျိုးထိစေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထား သည့် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြပါသည်။ မှားယွင်းသောအယူဝါဒသည် အလွန်ပင်ဆိုးသွင်း မည်ကို ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သည်။ ၎င်းမှာ စတင်နှင့်နေပြီဖြစ်သည်။ Dr. John. F. Walvoord က မဿဲ ၂၄း ၄- ၁၄တွင်ဖော်ပြထားသော နိမိတ်လက္ခဏာသည် “မျက်မှောက်ကာလခေတ်တွင်လည်း အချို့သောအရာများစုံလင်လာပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။ ယင်းသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ပို၍ပြည့်စုံလာ ပေမည်။” (John F. Walvoord, Th.D. ,အဓိက ပရောဖက်ပြုချက်များ ၊ Zondervan Publishing House, ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ စာ-၂၅၄ )ဤသည်မှာ မှားယွင်းသောအယူဝါဒနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျက်မှောက်ကာလတွင် စတင်မည်။ ယခုအချိန်မှာ “သတိပြုရမည့်အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင်လုံး၀ပြည့်စုံသွားပေလိမ့်မည်။”
ကျွန်ုပ်တို့သည် “မှားယွင်းသောအယူဝါဒ” စတင်သည့်အချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြပါသလား။ Dr. Harold O. J. Brown ၏စကားကို နားထောင်ကြပါစို့။သူက “ဘာသာတရားကို ထုံးတမ်းစဉ်လာပန်းဖွား ဆီသို့လမ်းလွှဲဘေးဖယ်ထားကြသည့်အပြင် ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုများသည် အခွင့်အာဏာ၏ယေဘုယျသောကဖိစီးသည့် ဝေဒနာဆီသို့ဦးဆောင်သွားသည်။” (The Sensate Culture, Word, ၁၉၉၆၊စာမျက်နှာ -၅၄ ) သင်၌ အသင်းတော်သည် ခက်ခဲသည့်အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းနေရသည်ကို တွေ့မြင်ရန် Ph.D. ဘွဲ့မရရှိပါ။ သမိုင်းဆိုင်ရာဘာသာတရားအားလုံးသည် အဖြစ်သဘောသူတို့အသုံးပြုသောအရာ၏ပုံရိပ်သာလျှင် ယနေ့တိုင် အောင် ရေတွက်ဝင်ခြင်းတွင် တည်ရှိနေရသည်။ Southern Baptist Convention တွင် တချိန်ကလိမ့်တက်နေ
သောအရာသည်ပင် ယခုတွင် တစ်နှစ်တွင် အသင်းတော်ပေါင်း ၁၀၀၀လောက် ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် Southern Baptist အသင်းတော်ပေါင်း ၁၀၀၀ စီသည် အသင်း တော်တံခါးများကို ထာဝရပိတ်ကြပေသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှစတင်ကာ သူတို့၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသူဦး ရေလည်း နှစ်စဉ်လျှော့ကျလာပေသည်။ Southern Baptist အသင်းတော်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် အသင်းတော်ဦးရေပေါင်း ၁၀၀၀၀ဝသိန်းထက်မက ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ (အသင်းတော်ကပုံနှိပ်သောသတင်းအရ) ထို့ပြင် နေရာတိုင်းတွင်ကြည့်လျှင်ပင် အသင်းတော်ဝင်များစိတ်ဓာတ်ကျပြီး ကြောက်ရွှံ့နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။ ကျွန်ုပ်မသိသည့် တစ်ခုတည်းသော Joel Osteen အသင်းတော်သည် ပြောင်းလဲမှုများတွင် နှစ်စဉ်တိုးပွားလာကြသည်။ သူတို့လုပ်ဆောင်နိူင်သည့်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းမှာ ပါးနပ်သောကိုင်တွယ်ပုံ များဖြင့် အခြားအသင်းတော်ရှိအသင်းသားများကို “ခိုးယူခြင်း”ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များသည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများဆီသို့ တဖြည်းဖြည်းချော်ဝင်သွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Lewis Sperry Chafer ကို အမြဲတမ်းထောက်ခံမှုမပေးပါ။ သို့ရာတွင် သူ၏ဖော်ပြချက်များသည် အလွန်ပင်မှန်ကန်မှုရှိပေသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်များက [ မှားယွင်းသောအယူဝါဒနှင့်ပါတ်သက်၍ ] လူတို့သည် ယုံကြည် ခြင်းမှထွက်ခွါသူများအဖြစ်သရုပ်ဖော်ထားပါသည်။ (၁ တိ ၄း ၁-၂ ) “ဘုရားသခင် ကိုသိသောသူ”တို့ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြသောလည်းမပြောင်းလဲသေးသောသူတို့၏ကိုယ်ကျင့် တရားဖော်ပြခြင်းတစ်ခုရှိပေမည်။( ၂ တိ ၃း ၁- ၅ ) ရည်ညွှန်းချက်မှာ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကို ငြင်းပယ်လျက် အသင်းတော်၏နောက်ဆုံးသောကာလတွင် တိုးပွါးလာနိူင်စေသည်ထက် ဝိညာဉ်ရေး ရာတွင် ရရှိစရာလုံးဝမရှိသူတည်းဟူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းပုံစံများ၏ခေါင်းဆောင်များသည် ပြောင်းလဲသူများမဟုတ်ကြပါ။ (Lewis Sperry Chafer, D. D., Systematic Theology, အတွဲ ၄၊ Dallas Seminary ပုံနှိပ်တိုက်၊ စာမျက်- ၃၇၅ )
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောအသင်းတော်များသည်ပင် “ခရစ်တော်၏အသွေးတော်တန်ခိုးကိုငြင်း ပယ်လျက် မှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိသူများ”က သင်းအုပ်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းရှင်းလင်း လင်းဖော်ပြထားသကဲ့သို့ “ဖြန်းဆွတ်ခြင်း၏အသွေး” သည် “ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောယေရုရှလင်”သို့ ရောက်ရှိကြောင်းဆိုထားသည် ဟေဗြဲ ၁၂း ၂၄ကို ငြင်းပယ်သည် ကွန်ဆာဗေးတစ်သင်းအုပ်များစွာရှိကြသည်။ ဤဆရာများကို ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် “မင်တိုမီ”၊ တနည်းအားဖြင့် သူ၏သေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထား
သော John MacArthur ကဲ့သို လူများစွာတို့က နောက်တော်လိုက်ကြသည်။ သို့သော် Dr. Martyn Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုထားသည်။
လူတစ်ယောက်သည် စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားကို အမှန်တကယ်ဟောပြောသည် မဟောပြောသည်ကို စစ်ဆေးခြင်းမှာ “အသွေးတော်”အပေါ် သူ၏အလေးထားပြော ဆိုမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် သေခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်း သည်မလုံလောက်ပေ။ စစ်ဆေးခြင်းမှာ “အသွေးတော်”ပင်ဖြစ်သည်။ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းဆိုင်ရာဘုရားသခင်၏နည်းလမ်း (ဧဖက်၂)၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၈၁၊ စာ၃၃၁ )
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် အသွေးတော်၏ရန်ငြိမ်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်အ ပေါ် ကြီးမားသည့် မှားယွင်းမှုရှိသည်။ တရားဟောသူများက ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုနိူင်ကြပေသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် Spurgeon နှင့် Dr. Lloyd-Jones တို့လုပ်ဆောင်ဟောပြောခဲ့ကြသကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏အသွေး တော်အကြောင်းဟောပြောနိူင်သော အဓိကတရားဟောသူများမဟုတ်ကြောင်းကို မသိရှိကြပေ။ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီမစပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒပွါးများသည့် အချိန်ကာလတွင္ အသက်ရှင်နေကြသည်။
“အဘယ်သူမျှသင်တို့ကို အဘယ်သို့သောအားဖြင့် မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မ တိုင်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီး ခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်။” he apostasia - မှားယွင်းခြင်း (၂ သက် ၂း ၃ )
ထိုအရာမှာ မှားယွင်းသောအယူဝါဒ ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
(Leila N. Morris ၁၈၆၂-၁၉၂၉ ရေးစပ်ပြီး Dr. Hymers ပြင်ဆင်
ထားသည့် “ယနေ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်” ကောက်နှုတ်ထားသည်။ )
၂။ ဒုတိယအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း
သင်၏ကျမ်းစာအုပ်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၂း ၁၂ ကို ဖွင့်ကြည့်ပါ။ မတ်တပ်ရပ်လျက် ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ ရွှင်လန်းကြလော့။ မြေကြီးနှင့်ပင် လယ်သည် အမင်္ဂလာရှိသည်။ အကြောင်းမူကား၊ မာရ်နတ်သည် မိမိကာလတခဏ သာရှိသည်ကိုသိ၍၊ ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ ဆင်းလေပြီဟု ဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏။ ( ဗျာဒိတ် ၁၂း ၁၂ )
နောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ “အကြောင်းမူကား၊ မာရ်နတ်သည် မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကို သိ၍၊ ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွ သင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီ။”( ဗျာဒိတ် ၁၂း ၁၂ ) သင်တို့ထိုင်နိုင်ပါပြီ။
ဤသည်မှာ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း စာတန်၏အမျက်ဒေါသနှင့်ပါတ်သက်၍ဖော်ပြချက်ဖြစ် ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သိပါ၏။ သို့ရာတွင် တရုတ်အသင်းတော်ရှိ ကျွန်ုပ်၏အချိန်အတော်ကြာ သင်းအုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ Dr. Timothy Lin က ထိုနေရာ၌ ထိုထက်များသောအကြောင်းအရာကို တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သူက “စာတန်သည် ခရစ်ယာန်မြောက်များစွာထက် ပရောဖက်ပြုခြင်းအကြောင်းကို ပို၍သိပါသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ စာတန်က “အနက်ဆုံးသောတွင်း” ၌ နှစ်တစ်ထောင်အကျဉ်းချထားတော်မမူမှီတွင် သူ၌တိုတောင်းသောအချိန်ကာလကို သာရရှိကြောင်းကို သိသည်ဟု ဆိုထားသည်။ (ဗျာ ၁၂း ၁- ၂ )ဂျွန်ဖိလစ်က ဤသို့ရေးသားထားပါသည်။
စာတန်သည် ယခုအချိန်တွင် ချုပ်နှောင်ခံရသောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ စကားဖြင့်မဖော်ပြနိုင် လောက်အောင်အမျက်ထွက်ပြီး လူသားများအပေါ် ၎င်း၏အမုန်းတရားနှင့် ရန်ညိုး ပေါက်ထွက်ရန်နည်းလမ်းများအတွက် အမျက်ဒေါသဖြင့် ပိတ်ဆို့သည်။ ( Exploring Revelation, Loizeaux, ၁၉၉၁၊ စာ- ၁၆၀ )
စာတန်သည် ကောင်းကင်အရပ်၌ ဘုရားသခင်ကို အံတု ထိခိုက်နိူင်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏အမြင့် မြတ်ဆုံးဖန်ဆင်းမှုဖြစ်သည့် လူသားများကို ဆွပေးပြီး တိုက်ခိုက်သည်။ ၎င်းကို တမန်တော် ပေတရုက ဤသို့ ဆိုထားသည်။
“သမ္မာသတိရှိလျက် မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကိုမျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။” ( ၁ပေ ၅း ၈ )
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က Santa Barbara City College တွင် နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ရှိကောလိပ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်ကို ဒဏ်ရာနှင့်မပစ်သတ်မှီ ဒုက္ခသည် ခြောက်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် သတ်ဖြတ်ပြီး ဆယ့်သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိစေသည်။ ဤထူးခန်းအံ့ဖွယ်သတင်းကို YouTube ပေါ်တွင် ဖတ်ရှုလိုက်ရသောအခါ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင် ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာသောအတွေးမှာ “နတ်ဆိုးစွဲခြင်း”ဟူသောအရာဖြစ်ပေသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများချန်ထားခဲ့သည့် “The Exorcist” ကဲ့သို့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ကျွန်ုပ်တို့သည် တားနေသေနတ်များဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို တားဆီးနိူင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ယင်းရှုထောင့်မှာ မှားယွင်းသော အရာဖြစ်သည်။ အခြားလူငယ်တစ်ဦးကလည်း ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စော၍ အမြဲလိုက်ဓါးဖြင့် ကောလိပ်ကျောင်းသား ဆယ့်ခြောက်ဦးကို လှီးဖြတ်လိုက်သည်။ အကယ်၍ သေနတ်ကို ပိတ်ပင်ထားကြတယ် ဆိုရင် အမြဲလိုက်ဓါးကို အသုံးပြုကြလိမ့်မည်။
ဤလူငယ်များသည် မည်ကဲ့သို့နတ်ဆိုးစွဲသူများဖြစ်လာကြသနည်း။စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Dr. Judy Kuriansky က “ ပြစ်တင်ရှုပ်ချ အနှိမ်ခံရသောသူ၊ ဟောလီဝုဒ်က မြှင့်တင်ထားသကဲ့သို့ မကောင်းသောအရာအားလုံးကို မြင်သာစေသောသူ၊ ၎င်းမှာ အစဉ်လိုက်လူသတ်ဖြတ်သူ သို့မဟုတ် အအုပ်လိုက် လူသတ်ဖြတ်သူတို့ကို သင်အတုခိုးရယူရာနေရာဖြစ်သည်” ဟုဆိုထားပေသည်။ ထို့အပြင် အရွယ်ရောက်လာသောသူတို့ကြီးထွားမှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော Dr. Keith Kanner က ဒီဗွီ၊ ရုပ်ရှင် စသော မကောင်းသည် ဂိမ်းများကို ပြသသည်ကို ကြည့်ဖူးသည့် ကလေးသူငယ်များသည် ပို၍ကြမ်းတမ်းယုတ်မာလာကြသည်ကို သုတေသနလုပ်ဆောင်တွေ့ရှိရသည်” ဟု ဆိုထားပါသည်။ Dr. Kanner က “ဟောလီဝုဒ်ကိုစက်ဆုတ်ရွံ့ရှာတယ်”ဟု ဆိုထားသည်။ ( John Blosser, National Enquirer, ဇွန်လ ၉၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက် ၁၀-၁၁ ) Dr. Kanner က နိုင်ငံတော်၏သေနတ်ကိုင်အဖွဲ့ကို မဟုတ်ဘဲ ဟောလီးဝုဒ်ကိုရွံ့မုန်း
သည်မှာမှန်ပါသည်။ တကယ်တော့ နိူင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်နှင့်တွဲဖက်ခြင်းအားဖြင့် အဘယ်သူမျှ နတ်ဆိုးစွဲသူ များမဖြစ်ပါ။ သို့ရာတွင် ကလေးများစွာတို့သည် လိမ်ပိန်ခံနေရကြသည်။ အချို့သောသူများသည် မကောင်းသော ရုပ်ရှင်များ နှင့် ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးစွဲသူများဖြစ်တတ်ကြပါသည်။
လူငယ်လူရွယ်များ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို စွန့်လွှတ်သင့်ပါသည်။ နတ်ဆိုးစွဲ သူမဖြစ်ပါစေနှင့်။ နတ်ဆိုး၏လွှမ်းမိုးခြင်းကိုမခံပါနှင့်။ ထိုသို့သောအရာများကို သင့်ဘဝအသက်တာထဲမှ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
စကားမစပ်၊ Santa Barbara တွင် ကလေးများကို သတ်ဖြတ်သောသူသည် မည်သည့်အရာကို တွေးတောပါသနည်း။ ၎င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူမှာ မကြာသေးခင်က နှစ်ယောက်ကို ခုတ်ဖြတ်လှီးသူ ဇာတ်ကားတွင် တွဲဖက်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီမစပေသည်။ ကလေးများသည် အခွင့်အရေး များမရရှိကြပေ။
ထို့အပြင် နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးသည်။ နတ်ဆိုးသည် အသင်းတော်တစ်ခုဆီသို့သွားသည်ကို မမေ့မလျော့ပါနှင့်။ စာတန်သည် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းသွားသည်မှာ မှန်ကန်ပေသည်။ ထို့အပြင် သူနှင့် ၎င်း၏အပေါင်းအပါများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ရာတွင် အသင်းတော်များကို ဖရိုဖရဲဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Charles G. Finney ၏ ( ၁၇၉၂-၁၈၇၅ )ပြောင်းလဲခြင်းဟုခေါ်သောအရာ၊ ဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်၀ခြင်း ဟုခေါ်သောအရာ အကြောင်းများကိုဖတ်ရှုလေ့လာရသောအခါ ကြက်သီးထပြီး ဆံပင်များထောင်လာသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပျက်သောအခါ Finney သည် နတ်ဆိုးစွဲသူမဟုတ်ခဲ့လျှင် နတ်ဆိုးအလုပ် လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပေမည်။ သီဩလော်ဂျီတွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိသော ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းက “ Finney အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍အမှောင်ကျခဲ့လေပြီ။ သူသည် ဒုက္ခရောက်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ ထို့နောက်သူက “သင်တို့သည် သူ့မျက်နှာပုံစံကို တွေ့ဖူးပါသလား။သူသည် ကြမ်းတမ်းသော လူနှင့် ထပ်တူပါသည်” ဟုဆိုပါသည်။ သူသည် နတ်ဆိုး၏အသုံးပြုခြင်းကို ခံရသည် ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် Finney သည် သူ၏အမျက်ဒေါသအားလုံးကို ပရိုတဲ့တင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်သို့ကျရောက် စေပြီး အမေရိကားရှိ သင်းအုပ်အားလုံးကိုလည်း ပြောင်းလဲခြင်းနည်းစနစ်ဟောင်းကိုစွန့်ပစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်ဝါဒသို့ပြောင်းလဲပစ်ရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။(ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။)
Dr. Francis Schaeffer ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်မှာ ကြီးမားသောဧဝံဂေလိအမှောင်ထု ဟုအမည်ရသည်။အဘယ့် ကြောင့် ထိုသို့ခေါင်းစဉ်တပ်ရပါသနည်း။အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်းအုပ်ဆရာသည် Jonathan Edwards, George Whitefield နှင့် C. H. Spurgeon တို့၏ကနဦးဘာသာရေးလမ်းစဉ်ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီး “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” တည်းဟူသောနတ်ဆိုးဝါဒကို စွဲကိုင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကူမတော်မူပါ။ သန်းပေါင်းများစွာ သော ပျောက်ဆုံးသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များသို့ မပြောင်းလဲဘဲရောက်ရှိလာကြကာ ပျက်စီးကြ သည်။ Finney ၏ “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” တည်းဟူသော နတ်ဆိုး၏ဩဝါဒသည် ကွန်ဂရီကေးရှင်းသမားများ၊ မက်သဒစ်အသင်းတော်များ၊ ဖရစ်ဘက်တီးရီယာန်းအသင်းတော်များ၊ နှင့် မြောက်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ထိုအပြင် ယခုအချိန်တွင်လည်း တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်နှင့် ကိုယ့်အားကိုကိုး ဖန်တမင်တယ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကို အသင်းတော်အတွင်း၌ မလိုမုန်းတီးမှုများနှင့်ပြဿနာရှာပြီ အသင်းတော်ကို ဖျက်ဆီးစွန့်ခွါသွားကြသည့် မပြောင်းလဲသောလူများနှင့်ပြည့်နှက်စေလျက် ဖျက်ဆီးနေသည်။
“ဒါဝင်၏ဝါဒ” နှင့် “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” နှစ်ခုသည် နတ်ဆိုး၏ခတ်ရင်းပေါ်တွင်ရှိသော အချွန်နှစ်ခုဖြစ် သည်။ ထိုခတ်ရင်းနှစ်ခုပေါ်ရှိ အချွန်အားဖြင့် နတ်ဆိုးသည် အနောက်တိုင်းခရစ်ယာန်ကမ္ဘာကို ဖျက်ဆီးနေသည်။
“အဘယ်သူမျှသင်တို့ကို အဘယ်သို့သောအားဖြင့် မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မ တိုင်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီး ခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်။” he apostasia - မှားယွင်းခြင်း(၂ သက် ၂း ၃ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဖက်ပြုချက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီ။ မှာယွင်းသောအယူဝါဒဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီ။ သို့ရာတွင် အချက်နှစ်ချက်တည်းဟူသော အကျိူးတရားနှင့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို ကုသမှုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးလိုသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒအကြောင်းကို ပို၍သိရှိလိုပါက Iain H. Murray ၏ ကနဦးဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း ( Banner of Truth , ၂၀၀၅ )ကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
၃။ တတိယအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏အကျိုးဆက်များ
အကျိူးဆက်မှာ ရှင်းနေပေသည်။ အသင်းတော်ရှိအနည်းငယ်သောအသင်းဝင်များသာ ကယ်တင်တော် မူခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ သူတို့တွင် “အပြစ်သား၏ဆုတောင်းချက်”တည်းဟူသော ၃-၄ လသားစကားဆု တောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီး နှစ်ခြင်းခံကြသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတကား။ အလယ်ခေတ် ကစ်သလစ်ဝါဒနှင့် ထပ်တူပင်ဖြစ်သည်။ ပိုတောင်ဆိုးနေသေးသည်။ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် “မှားယွင်းသောထာဝရစိတ်ချမှု “ ကိုအနည်းဆုံးမပေးကြပါ။ ကလေးသူငယ်များကို နှစ်ခြင်းပေးထားခြင်းသည် တကယ်တော့ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးစာတန်၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် “အပြစ်သား တို့၏ဆုတောင်းချက်”ကို ရွက်ဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်ကူမတော်မူပါ။ “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ” သမားများသည် မြောက်များစွာသောနေရာများတွင် ပြောင်းလဲသောနှစ်ခြင်းများကို အာဖရိကနှလုံးသားရှိ မွေးရာပါဆံပင်အသား ရောင်ဖြူဆွတ်၍ မျက်နက်ပန်းရောင်ရှိသော လူတိရိစ္ဆာအလားဖြစ်စေသည်။ဤနေရာတွင် နှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များ၏ဖျမ်းမျှဖော်ပြချက်ရှိသည်။
“သင်ကလည်း၊ ငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏။ဘဏ္ဍာများကိုဆည်းပူးပြီ။ တစုံတခုကိုမျှမလိုဟု ပြောဆို၍၊ ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနားဖွယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်း၊ အဝက်အချည်းစည်းရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါတကား။” ( ဗျာဒိတ် ၃း ၁၇ )
“ထိုသို့အဧမဟုတ်၊ အပူမဟုတ်၊ နွေးရုံရှိသောကြောင့် ငါ၏ခံတွင်းသည် သင့်ကိုထွေး လုပြီ။” ( ဗျာ ၃း ၁၆ )
ဤသည်မှာ “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ” ဆောင်ယူလာသော မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်သည်။
၄။ စတုတ္ထအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို ကုသခြင်း
မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို သင်မည်သို့ ကုသနိုင်မည်နည်း။ ကုသရမည့်ဆေးဝါးကားအဘယ်နည်း။ အဖြေကားအဘယ်နည်း။ ကုသမှု၊ ဆေးဝါး၊ အဖြေမှာ သခင်ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို ကုသသောသူဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒအတွက် ဆေးဝါးပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒအတွက် အဖြေလည်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ထိုအကြောင်းအရာကို သိထားပေသည်။ ယင်းမှာ ဤသို့ပြောဆိုရသည့်အကြောင်းပင်တည်း။
“ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင် ငါမသိမမှတ်ဟု ငါ့စိတ်ပြဌာန်းခြင်းရှိ၏။” (၁ကော၂း ၂)
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ထဲမှ ရွေးနှုတ်ခဲ့သည်။ ငရဲထဲမှလည်းရွေးနှုတ်ထားသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မှားယွင်းသောအယူဝါဒထဲမှလည်း ကယ်လွှတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု၏သေနေသောထုံးတမ်စဉ်လာများနှင့် ၎င်း၏သေနေသောအသင်းတော်များထဲမှ ထွက်လာခဲ့ပါ။ သူတို့အထဲမှ ထွက်လာပြီး အသက်ရှင်သောခရစ်တော်ထံပါးသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သင့်ကို လုံးဝစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်။
( Edward Mote ၁၇၉၇-၁၈၇၄ ရေးစပ်သည့် “ကျောက်မြဲကျူး” )
ဤလောကတွင် ခရစ်တော်မှတပါး ခိုလှုံစရာ လုံခြုံသောနေရာမရှိကြောင်းကို ယနေ့မနက် ကျွန်ုပ်ပြော ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူထံပါးသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သူကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိူင်ငံတွင် မှားယွင်းသောအယူဝါဒအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သူတို့သည် အမေရိကန်နှင့် အနောက်တိုင်းမှ ဖြတ်ယူကြသည်။ သူတို့သည် ကူညီရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန်မရှိ၊ ခရစ်တော်သာရှိသည်။ ယေရှုသည် သူတို့ကို အတိုင်းအတာမရှိကူညီမစခဲ့သည်။ အမေရိကန် သမ္မာကျမ်းစာအ သင်းက ခန့်မှန်းထားသည်မှာ တရုတ်နိူင်ငံတွင် တစ်နာရီလျှင် လူပေါင်း ၆၀၀လောက်ပြောင်းလဲကြပြီး ယင်းအတိုင်းအတာအရာ တစ်နေ့လျှင် လူပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော်လောက်ပြောင်းလဲလာကြသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ကိုးစားယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်၍ လူငယ်လူရွယ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကို ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင် ပြီး အသင်းတော်သို့ပို့ဆောင်ရန် ခွန်အားပေးတော်မူခဲ့သည်။
ခရစ်တော်သည် သင်၏အပြစ်ကို လွှတ်ပေးနိူင်သည်။ သင်၏အပြစ်ကြွေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် သင့်အား အသက်နှင့် မျှော်လင့်ခြင်းကို ပေးရန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ လာမည့် တနင်္ဂနေ့တွင်လည်း ဤနေရာသို့လာရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် “လောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်” ထံသို့ တိုက်ရိုက်လာရန်လည်းခေါ်ဖိတ်ပါသည်။ စစ်မှန်သောခရစ် ယာန်ဖြစ်လာခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဆီသို့လာပြီး ကျေးဇူးပြု၍ဆွေးနွေးပါ။ အာမင်…….။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၂ သက် ၂း ၁-၉
တရာဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က “ယနေ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်” တေးသီချင်းဖြင့်ချီးမွမ်းသည်။
(Leila N. Morris, ၁၈၆၂-၁၉၂၉ ရေးစပ်ပြီး သင်အုပ်က ပြုပြင်ဖန်တီးပေးသည်။ )
“အဘယ်သူမျှသင်တို့ကို အဘယ်သို့သောအားဖြင့် မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မ တိုင်မှီ ဖောက်ပြန်သင်းခွဲခြင်းသည် အရင်ဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီး ခြင်း၏သားသည် ပေါ်လာရလိမ့်မည်။ (၂ သက် ၂း ၃ ) ၂တိမောသေ ၄း ၃
၁။ ပထမအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒပေါ်လာခြင်း (ဟေဗြဲ ၁၂း ၂၄ )
၂။ ဒုတိယအချက်-မှားယွင်းသောအယူဝါဒဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း(ဗျာ ၁၂း ၂၄၊ ၂၀း ၁-၂ ၊၁ပေ ၁း ၈ )
၃။ တတိယအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏အကျိုးဆက်များ (ဗျာ ၃း ၁၆၊ ၁၇ )
၄။ စတုတ္ထအချက်- မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို ကုသခြင်း (၁ကော ၂း ၂ )